ငါဘာကြောင့်ငါမသိတာလဲ | Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့မှမှန်ကန်သောဖောက်သည်များရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလားအလာကိုအရည်အချင်းပြည့်မီရန်အရေးကြီးသည်။ ဖောက်သည်မှားသူများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မှတ်ထိုးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကျဆင်းလာခြင်း၊ အစည်းအဝေးပမာဏတိုးများလာခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင် ၀ မ်းနည်းမှုများတိုးများလာခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းသိနိုင်သည်။ ငါတို့အဲဒါမလိုချင်ဘူး ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောရလဒ်များကိုကြည့်ရှုလိုသောဖောက်သည်များကိုလိုချင်သည်။
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာငါလုပ်ခဲ့ရတယ် ခေါ်ဆိုမှု ကျနော့်သူငယ်ချင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကို \_ t ချတ်ပိုလတ် Kuno ကို Creative မှာ။ ချဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ၀ ယ်ယူရန်ကြိုးစားနေသောကြီးစွာသောရောင်းချသူနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကိုရောက်ရှိခြင်း၊ ၄ င်းတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောအဓိကဖောက်သည်များ…သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားမည်ဟုမျှမျှတတယုံကြည်မိပါသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းတို့တွင် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်၊ အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောမေးခွန်းများစွာကိုဖြေကြားရန်၊ ချန်နယ်မန်နေဂျာနှင့်စကားပြောရန်၊ ချန်နယ်မန်နေဂျာမှပေးပို့သောဗွီဒီယိုအနည်းငယ်ကြည့်ရှုရန်၊ မေးခွန်း ၅၀ ခန့်နှင့်အတူဇယားကွက်တစ်ခုကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့သိတော်မူမည်နည်း။
ငါ egocentric လူရှုပ်သဘောမျိုးအတွက်ဆိုလိုဘူး။ ငါတကယ်ရိုးရိုးသားသားစိတ်ပျက်မိသည် ငါဘယ်သူလဲမသိဘူး! သူတို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်တိုးတက်လာသည်။ သူတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များလည်းရှိသည်။ ယခုသူတို့သည်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလူအများပါဝင်လာကြပြီးလုပ်ငန်းနှင့်သိပ်မရင်းနှီးသောကြောင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၌နာမည်ကောင်းနှင့်နာမည်ကောင်းရှိကြောင်းအမှန်တကယ်မသိကြပါ။ ငါသူတို့ကြည့်ဖို့အချိန်ယူပြီးမယုံဘူး။ ငါရောင်းအရသာအတွက်အခြားနံပါတ်တစ်ခုပဲ။
ငါအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ငါ့၌ကြီးမားသောအောက်ပါတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်သောကြောင့်ငါစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ငါကစတိဗ်ဂျော့ဘ်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာသူတို့ဟာသူတို့ပြီးမြောက်ဖို့၊ ပြောဆိုဖို့နဲ့မျှဝေဖို့ကြိုးစားနေတာကိုနားလည်တဲ့ထိပ်တန်း ၂၅ ယောက်မှာငါပေါ်လာမှာသေချာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်အတွင်း၌ကြီးမားစွာရောက်ရှိနိုင်သည် သူတို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရှေးရှေးမေ့မေ့လျော့လျော့ဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်ရောင်းအား၏အလွန်ကြီးစွာသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် လုပ်ငန်းစဉ်မှားသွားပြီ။ ဖြစ်နိုင်သမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်ပြုလုပ်သောပထမ ဦး ဆုံးအရာမှာ၎င်းတို့ကိုသုတေသနပြုရန်ဖြစ်သည်။ တခါတရံမှာငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကြီးမြတ်တဲ့ဖောက်သည်ဖြစ်တော့မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တွေလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကြီးဖြစ်လို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာစီးပွားရေးလုပ်တယ်။
ငါစာရင်းဇယားဖြည့်ဖို့မသွားဘူး။ ချဒ်၏အဆက်အသွယ်သည်သူတို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှအခြားခေါင်းဆောင်တစ် ဦး နှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်စေချင်သည်ဖြစ်စေမတွေ့သည်အထိကျွန်ုပ်စောင့်စားမည်။ ငါသရုပ်ပြပွဲမှာထိုင်ပြီးငါတို့ဖောက်သည်တွေအတွက်သုံးနိုင်တဲ့ကိရိယာတွေကိုတွေ့တော့မှသူတို့မလုပ်မိရင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဘယ်သူ့ကိုနားလည်မှာလဲဆိုတာထက်ငါ့ကိုအဆင့် ၄၂ အဆင့်နဲ့လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါသူတို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့မသေချာဘူး။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်သမျှအားလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုထဲသို့မချသင့်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်များသည်စက်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ သို့သော်လူသားများသည်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ ခင်ဗျားရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကစာရင်းဇယားတွေထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကတကယ့်လူတွေပါ။ သင်လုပ်သမျှအတွက်ချွင်းချက်ရှိသင့်သည်။ အချိန်ကာလမှသည်ဘတ်ဂျက်အထိအသုံးချသည့်အရင်းအမြစ်များအထိဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကိုကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအလားအလာများထဲမှတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်နားလည်သကဲ့သို့ခံစားစေချင်သည် သူတို့ဘယ်သူလဲ, သူတို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲနှင့် သူတို့ကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ.
ဧပြီ 27, 2012 မှာ 8: 14 AM
Bravo Doug! ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်၌အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုယခုအချိန်အထိအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ ငါသဘောတူတယ်၊ တခါတရံမှာစက်တွေကိုဘေးဖယ်ထားဖို့လိုတယ်၊ လုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာပါတီတွေကလုပ်တယ်။ ကာလ။
ဧပြီ 27, 2012 မှာ 10: 11 AM
လုပ်ငန်းစဉ်ကအရေးကြီးတယ်။ ဒါဟာများသောအားဖြင့်ဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူနှစ် ဦး စလုံးကူညီပေးသည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာသူကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏မျက်နှာသာအတွက်ဘေးဖယ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရောင်း ၀ ယ်မှု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းမှာမည်သည့်အချိန်တွင်လုပ်ငန်းမှခွဲထွက်ရန်နှင့်လူများနှင့်စကားပြောရန်ဖြစ်သည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် 'သုတေသနသည်အလွန်အရေးကြီးသည်' ဟုသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ သင်နှင့်စကားပြောနေသူကိုအမြဲတမ်းသိထားပါ။
တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒေါက်ဂလပ်။ သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိမ့်မည်။
ဧပြီ 28, 2012 မှာ 3: 47 AM
ဒီမှာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်နှင့်ဤနေရာတွင်သင်အကြောင်းကိုသိရန်ကောင်းတဲ့။ သင်ဒီမှာရေးသမျှအားလုံးဖိတ်ခေါ်အသံပါ
ဇွန် 25, 2012 မှာ 1: 03 pm တွင်
နည်းပညာအသစ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်လူတစ် ဦး သည်လူသားမဆန်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆက်ဆံရေးကို deemphasizing ။ ပြီးတော့ဒါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်တကယ်ပဲ
လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီအားအလေးထားသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းသည်အမှုဆောင်အရာရှိ၏အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်
ကုမ္ပဏီ၏အရွယ်အစားနှင့်သူသို့မဟုတ်နည်းပညာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ဆက်ဆံရေး
ကျွန်ုပ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မဖွံ့ဖြိုးပါက
ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီကြီးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေသည်ဖြစ်စေစားသုံးသူနှင့်ဆက်ဆံမှု
သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှသာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချရန်ကျွန်ုပ်မသွားပါ။ င်း
ငါပုံစံတစ်ခုသာဖြည့်ပါလိမ့်မယ်, မေးခွန်းလွှာပေး, အင်တာဗျူးလုပ်လိမ့်အလွန်ရှားပါးသည်
ပြီးတော့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုရယူပါ။ ဒါဟာငါ့အလုပ်၏လိုင်း၌ဖြစ်ပျက်မထားဘူး, အမြဲတမ်းရှိတယ်
သူတို့က။ ဒါဆက်ဆံရေးပဲ တဖန်သင်တို့လုပ်မယ့်လမ်းကိုထုတ်တွက်ဆလို့မရပါဘူး
Carlile Patchen & Murphy က LLP